Android အတွက်အကောင်းဆုံး Fall ယောက်ျားများအမျိုးအစားများ Androidsis
Manuel Ramirez | 05/04/2021 20:00 | Android ဂိမ်းများ
အခြေခံကျသောအကြံဥာဏ်ရှိရန်နှင့်ကြော်ငြာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အသုံးစရိတ်များလုံလောက်မှုမရှိဘဲဂိမ်းတွင်ထုတ်ယူခြင်းသည်ကြောက်စရာနီးပါးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် Clone မြောက်မြားစွာသို့ကူးယူနေစဉ်သင့်အားတောင်ပံပေးသောပရိသတ်ထံသင်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ တစ် ဦး ကျဆုံးခြင်းယောက်ျားတွေတစ်ခုသို့မဟုတ် Stardew ချိုင့်ဖြစ်လာဖို့လုံလောက်ပါတယ်.
ရဲ့နှင့်အတူလိုက်ကြကုန်အံ့ Android အတွက်အကောင်းဆုံး Fall Guys ဂိမ်းများ နှင့်လအနည်းငယ်အတွင်း, နွေရာသီကတည်းကသူတို့က၎င်း၏တာဝန်ခံလေ့လာမှုအားဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သောဤဂိမ်း၏အခြေစိုက်စခန်းပွားနေပေါင်းပင်ကဲ့သို့ထွက်လာကြပြီ တစ်ပါတ်အကြာ Epic Games အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လုပ်သာလုပ်။
4 dudes လဲ
5 fluffffy Fall: အစာရှောင်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားပါ။
6 သေဖို့စကားမပြောနိုင်သောနည်းလမ်းများ: စူပါဟီးရိုးများ
7 Hex ကြယ်များ
9 Ultimate ကျဆုံးယောက်ျားတွေ
10 ယောက်ျားများ Run: Knockout Royale
11 ပါတီ Royale: မကျပါနဲ့!
12 ဆိုဒါ Guys
13 Fall Boys: Ultimate Race Tournament Multiplayer ကစားနည်း
14 သားမွေး - Ultimaten နောက်ကောက်
Y Fall Guys သည် Android သို့တစ်ချိန်ချိန်ရောက်ရန်စောင့်နေစဉ်ဒါကိုတီထွင်နေတဲ့အချိန်မှာ Fall Guys အမျိုးအစားဂိမ်းတွေထဲကပထမဆုံးစာရင်းဝင်ဒီဂိမ်းကိုကျွန်တော်သွားမှာပါ။ ဤနေရာတွင်ကစားသမား (၃၂) ဦး နှင့်မြေပုံတစ်ခုတွင်ကစားရန် ၀ င်ရောက်ပြီးကျယ်ပြန့်သောတိုးချဲ့မှုနယ်ပယ်နှင့်အခြားသူများမှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်အသုံးပြုရန်အတွက်လက်နက်နှင့်လက်နက်များစွာရှိသည်။ အားလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးတစ်ခုချင်းစီ ဂိမ်းမိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည်။ Fall Guys ထက် Battle Royale နှင့်ပိုမိုနီးကပ်ရန်အတွက် Isometric ရှုထောင့်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
အကယ် Fall Guys နှင့်ပိုမိုဆင်တူသည်နှင့် multiplayer ကမ်းလှမ်းသည် ဒီဂိမ်းကများသောအားဖြင့်ပေးလေ့ရှိတဲ့ရယ်စရာအချိန်လေးတွေနဲ့သင်အချိန်အများကြီးရနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ရူပဗေဒနှင့်၎င်းအဝါရောင်ဟာသစမ်းသပ်မှု (Tele 90 ရှိ 5's TV show) သည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ သူကကျွန်တော်တို့ကို game mode သုံးမျိုးကိုပေးသည်။ စိန်ခေါ်မှု၊ ကျနော်တို့ကစားသမားများစွာသောပုံရင်ဆိုင်ရဖို့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ: Crystal Pug Pty, Ltd
သင်လုပ်နိုင်သည် Noodleman.io ကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းသည် multiplayer ကိုကမ်းလှမ်းနိုင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည် နှစ်ဦးစလုံး ဒေသခံနှင့်အွန်လိုင်းဒါဖြစ်နိုင်တယ် အိမ်မှာရှိရင်လက်ကိုင်ဖုန်းနှစ်လုံးအတွက်အကောင်းဆုံးကစားနည်း။ ၎င်းတွင် Epic Games မှ ၀ ယ်ထားသောဂိမ်းကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာဝတ္ထုရူပဗေဒနှင့်မိုက်မဲသောဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းလည်းရှိသည်။ အချို့ကစားသမားများမှတ်ချက်ချသကဲ့သို့အချို့သောအချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရယ်မောရန်ခွင့်ပြုသည့် bug အချို့ပင်ရှိသည်။ ဤစာရင်းရှိဂိမ်းအများစုလိုအခမဲ့ဖြစ်သည်။
Noodleman.io - ပါတီပြိုင်ပွဲကိုတိုက်ခိုက်ပါ
ဒီမှာ ကျနော်တို့ 39- ကစားသမားဂိမ်းများကိုရိုက်ထည့်ပါ ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးပြီးအောင်နှင့်ကျန်အောင်ပွဲမှပြိုင်ပွဲထဲကကျန်ကြွင်းရန်ရှိသည်သော။ သူတို့ဟာ Fall ကိုမသုံးကြသေးဘူး၊ Fall Guys လိုဂိမ်းမျိုးကိုကစားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Clone တွေရဲ့စာရင်းကအာရုံစူးစိုက်မှုကိုမရပ်တန့်နိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သောင်းနဲ့ချီတဲ့ထောင်ချီတဲ့ထောင်ချီတဲ့သန်းခေါင်စာရင်းကိုရောက်တဲ့ဂိမ်းတွေအကြောင်းပြောနေတာပါ Multiplayer Multiplayer Multiplayer Multiplayer Multiplayer Multiplayer Multiplayer Multiplayer Multiplayer ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။
Fall Dudes (အစောပိုင်း Access)
ရေးသားသူ: PepUp စတူဒီယို
fluffffy Fall: အစာရှောင်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားပါ။
ယခုမှာ ကျနော်တို့ 100.000 ကျော်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတူသောသူတို့၏တ ဦး ကိုသွားပါ, ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းကစားသမား Fall Guys အမျိုးအစားဂိမ်းဖြစ် multiplayer ကနေဝေးသောအရာ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ဟာအတားအဆီးများစွာကိုရှောင်ကြဉ်ရမယ်၊ ဒါမှခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေဟာဒီအဆင့်ကနေလက်တွေကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်လို့သူတို့ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်။ သင်မမှတ်မိသောအသက်အရွယ်အားလုံးအတွက်ဂိမ်းတစ်ခု၊ သင်ကစားသမားနှင့်အရာဝတ္ထုရူပဗေဒပါသောမိုက်မဲသောအက္ခရာများကိုသင်လက်လွတ်လိမ့်မည်။
ရေးသားသူ: ဘာ (ဂိမ်းများ)
အဆင့်မြင့်ဂိမ်းအတွက်ရယ်စရာရုပ်ရည်များနှင့်စူပါဟီးရိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံကစား ဦး မည် ကျနော်တို့ AI သို့မဟုတ်ဂိမ်း၏ Artificial Intelligence ဆန့်ကျင်ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အတားအဆီးများကိုရှောင်ကြဉ်ရမည်၊ အဆင့်တစ်ခုစီ၏မတူညီသောစက်ပြင်များကမကြေမွစေရန်အတားအဆီးများကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်၊ စကားမစပ်တစ်ခုစီသည်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစီကိုလေ့လာရန်နှင့်အမှားများအပေါ် အခြေခံ၍ စစ်ဆေးရန်သွားရန်အလွန်ကောင်းစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားသူများကဲ့သို့ downloads များများစားစားမရှိသော်လည်း၎င်းသည်အဆင့်တိုင်း၌မျှတစွာထိန်းသိမ်းထားသောဂိမ်းဖြစ်သည်။
အရာအတွက်ကျဆုံးခြင်းယောက်ျားတွေယောက်ျားတွေ၏နောက်ထပ်တစ်ခု ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့မှာအွန်လိုင်းကစားသူများစွာရှိပြီးပျော်စရာပင်လယ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့အားလုံးကဒီကနေခုန်ဆင်းနေကြတဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးဟာဆx္ဌဂံပုံပြင်တွေထဲကိုကျသွားဖို့ကြိုးစားနေတာမို့ကျန်တဲ့သူတွေကျတော့သူတို့ဆုံးရှုံးနေတုန်းမှာသူတို့ကိုရှင်သန်နေစေလိမ့်မယ်။ သင်သည်သော့ဖွင့်ခြင်းအရေခွံများနှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းများမပါသောဂိမ်းတစ်ခုနှင့်အတူပျော်ရွင်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်ကြိုးစားသောအခါသင်၌ကောင်းသောဂိမ်းအချို့ရှိလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ကစားသမားအတွက်အလားတူဂိမ်းကနေအနည်းငယ်လမ်းလွဲကျွန်ုပ်တို့၏ပုံသဏ္slာန်လျှောနေသောပြွန်ကိုအာရုံစိုက်ရန်အတွက်၎င်းသည် isometric ဂရပ်ဖစ်များနှင့်စိတ် ၀ င်စားသောရှုထောင့်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ရင်ဆိုင်ရသည့် AI မတိုင်မီပြီးအောင်ကြိုးစားရန်အတက်အကျ၏အားသာချက်ယူရှိသည်။ အရောင်များတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုနှင့်အထက်ပါ၏ဗေဒကူးယူ။ ၎င်းသည်ထီးကိုသာအဓိကထားပြီးလေကိုမြန်မြန်သွားနိုင်ရန်ကူညီသည်။ များစွာသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမပါဘဲအခမဲ့ဂိမ်း, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ Androidsis ရှိဤလိုင်းများမှအကြံပြုသည်။
ကျနော်တို့ကစားသမားသို့မဟုတ် bot ကိုဆန့်ကျင်ကစားမယ်ဆိုရင်လည်းငါတို့အဘို့မရှင်းလင်းသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီစာရင်း၏ဇာတ်ကောင်များ၏နောက်ထပ်ပုံတူဂိမ်းတစ်ခုရင်ဆိုင်နေရသည်။ ၎င်းသည်အခြားသူများ၏ပျမ်းမျှရမှတ်နှင့်ဒေါင်းလုပ်များနှင့်မဝေးပါ၊ သို့သော်၎င်းသည် Fall Guys ၏ပတ်လမ်းတွင်နေရာချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားမှုအတွက်အရောင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားသည်။
ယောက်ျားများ Run: Knockout Royale
အလွန်ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောစတိုင်လ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်း၊ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အခြေခံအားဖြင့်အခြေခံအားဖြင့်၎င်းစာရင်းတွင်အများဆုံးပါဝင်သည်။ သူဟာအကောင်းဆုံးသူတွေဖြစ်တဲ့ဒီကျဆုံးနေသောယောက်ျားများကိုငါတို့မထွက်ခွာနိုင်ဘူး။ အကြီးမားဆုံးမသန်စွမ်းမှုကဂိမ်းများကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အခြားကစားသမားများ၏ "shadows" သို့မဟုတ် "ghosts" နှင့်အမှန်တကယ်ကစားနေသည်။ ဆိုလိုတာကသူတို့ကသူ့နာမည်ကိုယူပြီးသူကသူဟာကစားသမားတစ်ယောက်လိုပဲ။ ဒါပေမယ့်သူကတကယ် bot တစ်ယောက်ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများကိုဆန့်ကျင်သောကစားဟန်ရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ရေးသားသူ: GreenPixel Ltd
ပါတီ Royale: မကျပါနဲ့!
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မှာတကယ့်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အခြားရယ်စရာဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်မှာ multiplayer ရှိတယ်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်သည် 40.000 ကျော်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောပျမ်းမျှရမှတ်။ ဟုတ်ပါသည်၊ အရေခွံများကို ၀ ယ်ရပြီးအမှန်မှာအချို့သူများအတွက်အမှတ်ရရန်ပေးဆပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်မှန်ပါသည်၊ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်တော့စာရင်းတွင်ပါသောအကောင်းဆုံးဂိမ်းများအနက်မှအခြားပြိုင်ပွဲနှင့်မရပ်မနားရယ်မောခြင်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ Soda Guys မှ Google Play စာမျက်နှာမှ Fall Guys နှင့်ဆင်တူကြောင်းသတိပေးသည်အဲဒါတစ်ခုခုအတွက်ပါ ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုများသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပေမယ့်သူတို့ဟာဂိမ်း၏အခြေခံစက်ပြင်များကိုကူးယူခဲ့ကြတာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိကြသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည် Epic Games မှဝယ်ယူထားသည့်အထက်ပါအရာများနှင့်ဆင်တူသည့်အရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါက၎င်းကို၎င်း၏ရူပဗေဒ၊ real-time multiplayer နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားစမ်းသပ်မည့်အဆင့်များနှင့်စမ်းသပ်ရန်အချိန်မဖြုန်းပါနှင့်။ ကစားသမားတွေ၊ ကစားသမားတွေကိုတကယ့်အချိန်မှာကစားမယ်ဆိုရင်ဒါဟာနက်နဲသောအရာဖြစ်ပေမဲ့ ...
ဆိုဒါ Guys (အစောပိုင်းဝင်ရောက်ခွင့်)
Fall Boys: Ultimate Race Tournament Multiplayer ကစားနည်း
ကစားသမား (၃၀) ၏ကစားနည်းဖြင့်ကစားနည်းကို online multiplayer သို့တိုက်ရိုက်သွားသည် ကွဲပြားသောဂိမ်းစနစ် ၁၂ ခုနှင့်သင်သော့ဖွင့်နိုင်သောဇာတ်ကောင် ၅၁ ခုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည် Fall Guys စာရင်းတစ်ခုလုံး၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးမိတ္တူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့်၎င်းတွင်အကြောင်းအရာများကိုသော့ဖွင့်ရန်အတွက်အကုန်အကျများပြီးအက္ခရာများများစွာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ကိုအဖွင့်အသာဆုံးကစားသမားများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံခဲ့ပြီးသူတို့က Play Store တွင်အပြုသဘောဆောင်သောနည်းလမ်းဖြင့်တင်ခဲ့သည်။ အက္ခရာများသည်သင်မျှော်လင့်ထားသလောက်ကောင်းစွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်းမရှိသော်လည်းအခြားသူများနှင့်ဆန့်ကျင်နေခြင်းအားဖြင့်ကောင်းမွန်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သားမွေး - Ultimaten နောက်ကောက်
ပြီးတော့ဒီဂိမ်းကိုစာရင်းထဲမှာထည့်လိုက်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကနာမည်တူကိုသုံးတာနဲ့ထောင့်မကျတဲ့အတွက် \_ t သူတို့က "Furries" မှ "Fur" ကိုသုံးပေမယ့်ငါတို့မှာအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေရှိတယ် သူတို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်မဖြစ်ကြောင်း။ ၎င်းတွင်အွန်လိုင်းကစားသူများစွာ၊ အရည်အသွေးကောင်းသည့်ဂရပ်ဖစ်များ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအပြီးသတ်မှုများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ ဒါဟာတခြားသူတွေလောက်မလွယ်ကူဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့က Android mobile မှာ Fall Fall Guys အမျိုးအစားဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ဖို့သင့်ကိုပိုပိုပြီးချိတ်ဆက်လာမှာပါ။
သားမွေး - Ultimate နောက်ကောက်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ဂိမ်းများ » Android အတွက်အကောင်းဆုံး Fall Guys ဂိမ်းများ